I-2014 - Ubungqina obufutshane bendawo ye Geo - Geofumed
I-2014 - Iziprofeto ezimfutshane zeimeko ze Geo
NgoDisemba, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, GIS asibonise, Microstation-Bentley, SuperGIS, UDig, Ezahlukeneyo
Ixesha lokuvala eli phepha, kwaye njengoko kwenzeka kweso sikolo sabo bavala imijikelezo yonyaka, ndikhulula eminye imigca yento esinokuyilindela kwi-2014. Emva koko siza kuthetha ngakumbi kodwa namhlanje, ngowona nyaka wokugqibela:
Ngokungafani nezinye iinzululwazi, kwizinto zethu, izithethe zichazwa ngumbuthano wezinto ezenzeka kwi-hardware kunye nokusetyenziswa kwe-Intanethi.
Ngakolunye uhlangothi, iipilisi ezininzi ezinamandla + ezininzi ezinokwenza izicwangciso zokusebenza + izixazululo ezincinci ezithatha indawo iLottops = ukuthengwa okuthe xaxa kwamacwecwe ... Akungabi kubizi kodwa ngokubhekiselele kumandla abo. I-Smartphones ithatha indawo yabo ekunxibelelaneni ngenxa yokunciphisa ubukhulu.
Kwaye kwiphepha lewebhu: Phantse yonke into esuka efini, usebenzisana nayo nayiphina isofthiwe esaphila kwideskithophu, ukusetyenziswa okuvelisayo kwezonxibelelwano zentlalo, izinto ezingenanto ezingenanto zokuzisa umhlaba wangempela kwiwebhu.
Kwi-software ye-GIS yamahhala
Kuya kuba ngumdla onyakale we-OpenSource. QGis, kunye nomcimbi omkhulu wokuvuna; kuba isofthiwe esakhula emva koluntu, iya kuba nemingeni emininzi yokuxhaswa ngaphezu kwe-gvSIG, ekhoyo ngoku iindawo ezininzi kodwa abaphuculi bambalwa ngokuzinikezela ngokupheleleyo. Siyaqonda kwaye ukuncoma iinzame ezenziwa yi-Foundation for ngokubeka imodeli, kodwa siyakholwa ukuba liqale ngaphambili, xa kona imali eninzi imali inxaxheba kuphuhliso phantse ezimbini, thile emva kwexesha, nto leyo ekugqibeleni kuzisa iindleko eziphezulu yozinzo.
Iprogram ye-Intanethi ayiyikukhuphisana, ayikuthi ngubani ongcono. Kodwa ke kubalulekile ukuba kusinda yokuhlawula amatyala kwimeko lwabasebenzisi unzima kakhulu, isiqhelo ngayo ilifu, mobile kwiinkqubo Android, multidiscipline ukuba iifyuzi ningenakumbi geomarketing kunye nasebenza odlula kuyo, izicelo woluvo ekude kwaye kufutshane ne-geoengineering.
Imizekelo eyahlukileyo, kodwa kufuneka ufunde kokubili. Umngeni we-internationally gvSIG uthembisa, kodwa kufuneka uvelise ishishini elivuthiweyo kunye nemiyalezo efanelekileyo. Umgudu wokungavuseleli isondo se-QGis uqikelele, kodwa kufuneka uthintele ukuzimela ngokuxhaswa kwexabiso eliphezulu.
Ngaphambi kokuba sibone injongo kunye ne-GIS ephathekayo, kodwa ngoku sicinga umbono Izibonda, eyaziwa ngokuba yi-OpenGeo, ekhoyo ngoku inikeza inkxaso nenkxaso eyongeziweyo kwisisombululo esidibanisa inxalenye yendalo:
Ukuqina kweQGis njengomxhasi omncinci,
Zonke iiprojekti zokuphuhlisa iiLayisensi,
Umthamo ongenakukhunjulwa weGeSServer kwidatha kwiwebhu, ngaphezu kwe GeoWebCache ukuphucula ukulinganisa,
Kwaye i-PostGIS / i-Postgres yolawulo, uhlalutyo ngaphantsi kunye nakwii-bookstores ezithengayo ezaneleyo.
Yintoni enye i-combo?
Ngaba iincwadi zokuthengisa ezithe zaxhunyiwe kulo mgca ziya kuhlala zisinda?
Yintoni eya kuba yi-GvSIG Boundles?
Yintoni inxulumene neMapServer?
Ngaba i-DIG iya kufumana ukuthandwa komzalwana wayo omkhulu?
Ngaba i-SEXTANTE iya kuphila xa umxhasi wakhe echithwa yi-GRASS?
Bangaphi abathuthukisi ababenayo i-gvSIG ngoku?
Uninzi olunjani lo msebenzi we-ESRI phantsi kobuso obuhle?
Uninzi lwezi mpendulo alunomdla kumsebenzisi oqhelekileyo, kodwa banomdla kwizigqibo, okanye ngenxa yokuba sele bathathe, okanye ngenxa yokuba kufuneka benze ngokukhawuleza.
Kwaye nangona kungenakuqinisekiswa, simele sivume ngokunyaniseka okukhulu kangangokuba ngaphambi kokuba isofthiwe evulekileyo ye-GIS isofti ngexesha elinjalo eliqinisekileyo. Ngoko i-2014 iyathembisa, akuyena wonke umntu. Abo baphambili ngokudala i-ecosystem, abanye ngokukhulayo kuluntu, baqhelise nantoni na.
Nantsi indlela eyahlukileyo, ngenxa yokuba umnqweno wezoqoqosho, njengokuba siya kubona ukuziphatha okufanayo kwizinto ezinkulu:
I-AutoDesk isondela kwiintsebenziswano ezinkulu ngenxa yokwehlukana kwemithengiso yemakethe ye-stock. Uyazi ukuba i-GIS ayikho ishishini lakho, ukufumana okungakumbi ukuvelisa, ukupapashwa kunye nokwakha.
I-Intergraph iyanda inxalenye yesisombululo esiphezulu esenza iGeomedia + Erdas.
I-Bentley ithengisa abathengi abangakumbi bezoshishino, kwi-niche yayo: izakhiwo zobunjineli kunye neZityalo. Kwindawo ye-GIS, kuphela umgangatho obhekiselele kumacwecwe kunye nokukwazi ukusebenzisana namaqela enkcubeko.
I-Mapinfo ... Ngaba kukho iindawo eziphambili zePB?
Ayikho enkulu kubo.
Supergis, ngokunyaniseka kwayo okungapheliyo kwi-ESRI, kunye nokukhangela iimarike zasentshona.
I-GlobalMapper, isigxina, ixhamla kwi-piracy engayithetheleli isixhobo esingenzi nto yonke kodwa into eyenziwa ... Inhlonipho yethu. Uyenza kakuhle.
I-GIS ye-Manifold ... Akukho mzekelo, emva kweminyaka emininzi yembalela ngokuthelekiswa nobudlova bokuqala.
Abanye ... Ufuna umyalelo wemilingo.
Kuyamangalisa indlela esele siyenayo ngaphambili, kunye nento eyayisigxile emva kwayo. Nangona benzame, abanakufumana indlela yokudibanisa uluntu ... apho, ngombono wam, akusayi kuze kwenzeke xa begxininisa ekuqeqesheni okukuphela kwayo. I-CAD 2D yokwenza izicwangciso zokwakha ezingakhange zifakwe ku-BIM, ziya kulahlwa.
I-Business trend in 2014
Ubuncinane kwimeko yethu, kuya kuthatha kancinci ngoko siyazi kuza kwenzeka ngenye imini yokwenene-ihlabathi modelling (BIM), apho idibane iinkalo: idatha, geospatial, uyilo CAD kunye nokusebenza lwezibonelelo.
Kwi-2014 i-CAD iya kubambelela ekufaniseni i-BIM, kodwa indlela yeliya iya kuphuculwa ngokutsha kwimiqathango. Ukuphuculwa kwe-OpenSource kwi-CAD kwakhona kukusola, kuba nguyena ophangazelayo kwaye othanda izinto. Phakathi kwezinto ezinkulu, uyilo luza kufutshane nokusebenza, into ethile ye-BIM kodwa ingaphelelanga ukusebenzisa kwiimeko ezizodwa. Isiphumo esona siza kuhambelana nemigangatho yezixeko ezikhethiweyo, eziqhubela phambili, ukwenzela ukuba abavelisi kunye nabaphuhlisi bacinge ngokukulungele, kodwa kuninzi kulindeleke.
Kuya kuba ngunyaka olukhulu Cadastre, khumbula ukuba lonyaka, yaye ngokuqinisekileyo ndatshaya Isazobe ukuqhubeka uhlalutyo kakhulu ngoko kwenzeka kwiingxelo ze Cadastral 2014. Ebonisa inkqubela kombani yenziwa ngakwimilinganiselo kunye nemizekelo yenene LADM, wafa kakhulu eqhelekileyo mapping, izifundiswa kunye noshishino labucala ikwindawo ngokwayo kakuhle ngokwaneleyo, kodwa hayi onke amaziko karhulumente igcinwe isantya, ngoko ke nombuzo ukubuyiswa kweendleko kwaye ukuba ngokwenene ilungelo likarhulumente libonakala njengolwazi kumsebenzi osebenzayo owenza ubomi bomsebenzisi.
Ngoko ishishini elibandakanyekayo le-GIS liya kuqhubeka lijikeleze ngokujikeleza kweendawo, nto leyo ephumelele kakhulu. Kodwa siyazi ukuba i-GIS inezinto ezininzi zokunikela, kwiinkalo ezininzi ezingasenalo ubutyebi bazo. Kulo nyaka sinokulindela okunye ukusuka kumaqela athatyathwayo kunye nolu hlobo, nangona singenako ukuthetha ukuba iya kuhlanganisa intsebenzo kumashishini apho ingekho iingcali.
IMelika iya kuba nomnyaka wayo omkhulu, ngamehlo ayo kwiNdebe yeHlabathi eBrazil, iya kutsala imicimbi yezizwe ngezizwe. Kwaye siya kubona ukuzama ukwenza iForam yase-Latin American Geospatial Forum EMexico.
Simele sibe nethuba. Unwabile ukuba uye waza kubona ii-akhawunti zentlalo yentlalo yaba ngamashishini, ii-blogs zifumana igunya, a INosoloSIG obuyela ngenempumelelo enkulu, unyana uya kuqeda isikolo esiphakamileyo ngempumelelo, umama osekhulile usinika omnye unyaka wenkampani ...
... intombazana ukukhanyisa amehlo enjengelokuqala ngqa, ekhoneni elimnyama, kwigumbi lemoto, eklasini, kwiwindow yobomi ...
Unwabile kwaye unonophelo unyaka omtsha.
AutoDesk Bentley Systems cadastre ESRI egeomates My QGIS SuperGIS
Post edlulileyo«Edlulileyo CartoDB, okungcono ukudala iimephu online
Post Next Njani imephu lehlabathi 1922Okulandelayo "